Raw Flibanserin vovoka (167933-07-5) mpamokatra - Phcoker
SKU: 167933-07-5 Sokajy: Sex Hormone
Raw Flibanserin poopy (167933-07-5) video
Raw Flibanserin, vendrana antsoina hoe "Addyi", dia manaparitaka ny agonista sy antagonista serotoninina izay ampiasaina amin'ny fitsaboana ny vehivavy efa milevina amin'ny fanavakavahana ara-nofo (HSDD). Ny fanafody dia mampitombo ny isan'ireo traikefa ara-nofo mahafa-po isam-bolana amin'ny antsasaky ny toerana avoakan'ny toerana avoaka eo amin'ny roa na telo eo ho eo. Mandritra izany fotoana izany, Manan-danja amin'ny maha-agonista serotonerika, mpanohitra ny serotonerika sy mpanohitra azy izy.
Raw Flibanserin pohe (167933-07-5) Specifications
Product Name Raw Flibanserin
Anarana simika 1,3-Dihydro-1-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]-2H-benzimidazol-2-one
Drug Class Seroninônôma maromaro sy mpanohitra maro
molekiolan'ny Formula C20H21F3N4O
molekiolan'ny Wvalo 390.41 g / mol
mitsonika Point 225 ° C
Ny antsasaky ny biolojia ~ 11 ora
Solubility DMSO: soluble10mg / mL, mazava
Raw Flibanserin Application Nivelatra ho amin'ny fikarakarana ny tsy fahampian-tsakafo ara-pananahana amin'ny vehivavy
Raw Flibanserin pohe (167933-07-5) Description
Ny flibanserin-poopy dia ny zava-mahadomelina voalohany nankatoavina noho ny fikorontanan'ny faniriana an-tsokosoko (HSDD) ao amin'ny vehivavy premenopausal an'ny FDA tamin'ny volana aogositra 2015. Tany am-boalohany dia novolavolaina toy ny fanafody antidepressant an'ny Boehringer Ingelheim, saingy nampiseho ny tsy fahampian'ny fahaverezan'ny fitsapana ary dia novolavolaina ho rongony fanodikodinam-pihetseham-po mahatsiravina nataon'ny Sprout Pharmaceuticals. Ny hetsiky ny hetsika Flibanserin dia mifandraika amin'ny fiaraha-miasan'ny 5-HTA1 sy 5-HTA2, mampiseho ny asa agonista ao amin'ny 5-HTA1 sy mpanohitra ao amin'ny 5-HTA2, ka nahatonga ny fihenan'ny serotoninina ao amin'ny atidoha ary koa ny fiantraikany amin'ny fitomboan'ny norepinephrine ary dopamine neurotransmitters.
Flibanserin-poopy (167933-07-5) Mechanism of Action
Ny hetsiky ny hetsika Flibanserin dia mifandraika amin'ny fiaraha-miasan'ny 5-HTA1 sy 5-HTA2, mampiseho ny asa agonista ao amin'ny 5-HTA1 sy mpanohitra ao amin'ny 5-HTA2, ka nahatonga ny fihenan'ny serotoninina ao amin'ny atidoha ary koa ny fiantraikany amin'ny fitomboan'ny norepinephrine ary dopamine neurotransmitters. Ny Flibansetrine dia manana fiantraikany goavana amin'ny mpitsabo serotonin ao amin'ny atidoha: mihetsika amin'ny agonista ao 5-HT1A ary mpanohitra iray ao amin'ny 5-HT2A. Ao vivo, ny flibanserin dia mitambatra mitovy amin'ny 5-HT1A sy 5-HT2A receptors. Na izany aza, ao anatin'ny haavon'ny atidoha 5-HT (izany hoe, eo ambanin'ny tsindrin-tsakafo), ny flibanserin dia afaka mandray ny receptors 5-HT2A amin'ny ambaratonga ambony noho ireo mpanolo-tsaina 5-HT (1A). Mety manohitra ny mpanamboatra D4 (dopamine) sy 5-HT2B sy 5-HTB2C ihany koa izy. Ny hetsika ataon'ireo mpandidy neurotransmitter dia mety hitondra amin'ny fihenan'ny serotonine sy ny fampitomboana ny dopamine sy ny norepinephrine, izay mety handray anjara amin'ny fanodinana ny valisoa. Ny Flibanserin dia amidy eo ambanin'ny anarana komandy Addyi ary voambara fa ny fitsaboana vehivavy voan'ny aretin-koditra miaraka amin'ny fahantrana ara-nofinofy ara-nofo (HSDD) amin'ny ankapobeny, izay manamarika ny faniriana ara-nofo kely izay miteraka fahantrana na fahasarotan'ny fifandraisana.
Fampiharana ny vovo-dronono Flibanserin (167933-07-5)
Ny flibanserin-poopy dia 5-HT1A agonista sy 5-HT2A antagonista izay novolavolaina ho amin'ny fitsaboana ny aretina mitaiza ny lahy sy ny vavy amin'ny vehivavy (1,2).
Vovonan'ny Flibanserin Recommended (167933-07-5) Dosage
100 mg am-bavaka indray mandeha isan'andro isan'andro
Fitsaboana mandritra ny vanim-potoana: Tokony hajanona ity rongony ity aorian'ny herinandro 8 raha toa ka tsy milaza ny fanatsarana ny soritr'aretina ny marary.
Fanamarihana: Tsy voatery hanatsara ny fahatsaran'ny firaisana ity medikaly ity, ary tsy voalaza amin'ny fitsaboana amin'ny vehivavy na lahy na vavy.
Ny voka-dratsin'ny volombava Flibanserin (167933-07-5)
Ny fisehoan-javatra mampidi-peo dia mahazatra kokoa amin'ireo vehivavy mandray ny flibanserin. Ny ankamaroan'ireo tranga ratsy dia mora tamin-katsaram-panahy. Ny trangan-javatra ratsy be dia be dia be dia be koa ny fahanginana, ny hafanana, ny reraka, ny torimaso, ary ny tsy hatory.
Ny fisotroana alika raha eo ambony amin'ny flibanserin dia afaka miteraka tsindry ambany (ambany ny tosidra izay niteraka soritr'aretina taorinan'ny 2 solomaso divay nitranga tamin'ny 17%).